Author Topic: အမောပြေဟာသမှတ်စု (Read 499365 times)
« Reply #50 on: May 09, 2011, 05:50:48 PM »
အိမ်ထောင်သက် ဆယ်နှစ်ပြည့်သော်လည်း လင်မယားနှစ်ယောက်တွင် သားသမီး
မထွန်းကားချေ။ ၄င်းတို့နှစ်ဦး ဆရာဝန်အသီးသီးထံ ပြကြည့်သည်။
အကျိုးမထူးချေ။ တစ်နေ့တွင် ပယောဂ ဆရာတစ်ဦးက ရောမမြို့ရှိ
စိန့်ပီတာဘုရားကျောင်းသို့ သွားပြီး ဖယောင်းတိုင်ထွန်း ဆုတောင်းရန်
…နှစ်အနည်းငယ် ကြာသွားသည်။ ပယောဂဆရာသည် မိမိအကြံပြုလိုက်သည့်
လင်မယားတို့၏ အခြေအနေကို သိချင်သည်နှင့် ၄င်းတို့ နေထိုင်ရာအရပ်သို့
ရောက်လာသည်။ အိမ်ရှေ့တွင် ကလေးငယ် ငါးဦး ဆော့ကစားနေသည်ကို တွေ့ရာ ဤသို့
“စိန့်ပီတာဘုရားကျောင်းမှာ ထွန်းထားတဲ့ ဖယောင်းတိုင်ကို သွားမှုတ်ဖို့
စိတ်ရောဂါဝေဒနာသည်ကို ဆရာဝန်က မေးသည်။
“ကိုဥက္ကာ၊ ခင်ဗျားဆီ ဘာဧည့်သည်မှ လာတာမတွေ့ပါလား၊ ခင်ဗျားမှာ ဆွေမျိုးမရှိဘူးလား”
“အများကြီး ရှိတာပေါ့၊ သူတို့အားလုံး ဒီမှာရောက်နေကြတယ်။”
« Reply #51 on: May 09, 2011, 05:54:16 PM »
…အသည်းအသန် နာမကျန်းဖြစ်နေသော ယောက်ကျားဘေးတွင် ညပေါင်းများစွာ မအိပ်ဘဲ
လူနာစောင့် နေရသော ဇနီးသည်က ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သံဖြင့် ပြောသည်။
“ကို...၊ ကျွန်မ နည်းနည်းအိပ်မှ ဖြစ်တော့မယ်၊
ရှင်သေမယ်ဆိုရင် ကျွန်မကို နိုးနော်…”
“ မဆိုင်သူ မ၀င်ရ
…လူနာနှစ်ယောက် ဆေးရုံဝင်းအတွင်း အပန်းဖြေ လမ်းလျှောက်နေကြသည်။
ရေခဲတိုက်ကို ဖြတ်သောအခါ ချိတ်ထားသည့် “ မဆိုင်သူ မ၀င်ရ” စာတမ်းကို
တစ်ယောက်က အသံထွက်ဖတ်ပြီး အခြားတစ်ယောက်ကို မေးသည်။
…လူတစ်ယောက် ခွေးရောင်းနေသည်။ ၀ယ်မည့်သူက မေးသည်။
“ဟာ…သစ္စာရှိတာတော့ မပြောနဲ့၊ ဒီကောင့်ကို ကျွန်တော်ရောင်းတာ
သုံးခါရှိပြီ၊ အမြဲတမ်း အိမ်ကို ပြန်လာတယ်…”
« Reply #52 on: May 09, 2011, 05:59:56 PM »
အခန်းရဦးမလား မေးသည် မန်နေဂျာမှ ဟာ ... အခန်းကုန်သွားပြီ...
မရှိတော့ဘူး.... အမျိုးသမီးက ... အို ရအောင်လုပ်ပေးပါ...
အချိန်လည်းမရှိတော့ဘူး... တခြားကိုသွားဖို့မလွယ်လို့ပါ... ထိုအခါ
မန်နေဂျာမှ .. အင်း.. ခင်ဗျားလိုချင်ရင် တစ်ခန်းတော့ရှိတယ်... ဒါပေမယ့်
အဲဒီအခန်းထဲမှာ ယောင်္ကျား (၃) ယောက် ရှိတယ်....
တစ်ယောက်တည်းအေးအေးဆေးဆေး အိပ်လို့ရမယ်.... အဲ.. မဖြေနိုင်ရင်တော့
သူတို့အားလုံးနဲ့အိပ်ရလိမ့်မယ်... ဘယ့်နှယ်လဲ... အမျိုးသမီးမှ ...
ရတယ်လေ... အဲဒီအခန်းကိုပဲပေးပါ... အခန်းထဲရောက်သောအခါ ..... ယောင်္ကျား (၃)
ယောက်က အမျိုးသမီးအားမေးသည် အပင်ကပုပု.. အသီးကနီနီ.. အဲဒါဘာသီးလဲ...
အဖြေမှန်မှာ စတော်ဘယ်ရီသီးဖြစ်သည်... အမျိုးသမီးကလည်းသိသည်.. သို့သော်
ခရမ်းချဉ်သီးဟုဖြေလိုက်သည်... သို့နှင့် သူတို့အိပ်လိုက်ကြသည်...
နောက်တစ်ကြိမ် ထိုမေးခွန်းပဲထပ်မေးသည် အမျိုးသမီးကလည်း ခရမ်းချဉ်သီးဟုပဲ
ဖြေသည်... နောက်တစ်နေ့မိုးလင်းသော်.... အခန်းထဲမှ ..... အမျိုးသမီးရော
ယောင်္ကျား (၃) ယောက်ပါ ထွက်မလာသေးသဖြင့် မန်နေဂျာမှ ဘာများဖြစ်နေသလဲဟု
သွားကြည့်သည်... ထိုအခါအခန်းထဲတွင် ယောင်္ကျားသုံးယောက်မှာ ကုတင်အောက်မှ
ဒူးတုပ်ထိုင်ပြီး အမျိုးသမီးအားတောင်းပန်နေသည်... လုပ်ပါအစ်မရယ်....
သူ့ဆေးခန်းသို့ပထမဆုံးရောက်လာသည့်လူနာကို စမ်းသပ်ရင်း ရောဂါရှာမရသဖြင့်
ထို့နောက် အကြံတစ်ခုရပြီး လူနာကိုမေးလိုက်တယ်...
ခင်ဗျား အရင်က ဒီရောဂါဖြစ်ဖူးလားတဲ့
ဟုတ်ကဲ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်လောက်က ဖြစ်ဖူးပါတယ်
ဟုတ်ပြီ။ ဒါဆို အဲဒီရောဂါ ပြန်ထတာပဲ
ဗျို့ ကားဆရာခဏရပ်ပါဦး။ နောက်က တွယ်စီးတဲ့ လူတစ်ယောက် ပြုတ်ကျကျန်ရစ်ခဲ့လို့။
ကိစ်စမရှိဘူး။ သူ့ဆီက ကားခရပြီးသားပါ။
« Reply #53 on: May 09, 2011, 06:06:04 PM »
လူငယ်တစ်ယောက် မိမိအပ်ထားသောဖိနပ်ကိုလာရွေးသည်။ ဖိနပ်ပြင်သမားကပြောသည်။
" ပြင်ခ ၂၀၀ - ကျပါတယ် "
" နည်း လှချည်လား ...ကျွန်တော် လာအပ်တုန်း ကလေးရာကျမယ်ဆို "
" ခင်ဗျားရဲ့ ဖိနပ်တစ်ဖက် ပျောက်သွားလို့ပါ "
တရားသူကြီးက တရားခံကို မေးသည်။
"ဦးဘမောင်ကို ဘာဖြစ်လို့ ဖန်ခွက်နဲ့ နှစ်ခါတိတိ ပစ်ပေါက်ရတာလဲ"
"မောင်းမင်း ခိုးခဲ့တဲ့ ဒေါ်လာတစ်ရာကို မောင်မင်း ဘာလုပ်လိုက်သလဲ"
"ဟော်တယ်က မေရီဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို ပေးပြီး သူနဲ့ တစ်ည အချိန်ဖြုန်း လိုက်ပါတယ်"
"ရုံးတော်ကို မလိမ်နဲ့၊ မေရီဟာ ဘယ်တော့မှ ဆယ်ဒေါ်လာထက် ပိုမယူဘူး"
« Reply #54 on: May 09, 2011, 06:16:47 PM »
ဘုန်းကြီး။ ။ ဟဲ့ဒကာမ၊ ဘာဖြစ်လို့လာသတုံး။
ဒကာမ ။ ။ အရှင်ဘုရား လူထွက်မယ် ကြားလို့ပါဘုရား။
ဘုန်းကြီး ။ ။ ဟာ ဘုန်းကြီးက လူထွက်တာ ဘယ်ကမ္ဘာကမှ မရှိဘူးဟ။ တစ်နေ့က လာအပ် တဲ့ ကလေးနှစ်ယောက် ဟာဘယ်သူက မွေးတာတုံးဟ။
ဒကာမ ။ ။ တပည့်တော်မက မွေးတာပါဘုရား။
ဘုန်းကြီး ။ ။ အိမ်း! တစ်သက်လုံးမှတ်ထား၊ ဒကာမကသာ လူထွက် သဟ။
"ရှင် ကျွန်မကို ချစ်တယ်နော်"
"ဟေ့ ဟေ့၊ ခေါင်းစဉ်ကို ဗြုန်းစားကြီး ပြောင်းမပစ်နဲ့လေ"
« Last Edit: May 09, 2011, 07:45:44 PM by ဂိ ဂိ »
« Reply #55 on: May 10, 2011, 03:12:24 AM »
ကွင်းစ်တောင်းက မင်းအကြောင်းကို စဉ်းစားမိတော့… အိစ်ကုတ်မှာ
ငပိဖုတ်နဲ့တူတဲ့ မင်းမျက်နှာကို စနမ်းတာကို သတိရမိတယ် ။
မရီနာဘေးမှာ မဒီကညာလေးနဲ့ အထင်လွဲတော့ ဒီတခါဝေးပြီလို့ မင်းပြောခဲ့တာလေ ။
ဂျူယောင်းမှာ မင်း.. ပူဖောင်း လိုချင်တယ်ဆိုလို့ ကို စုဆောင်းထားတဲ့
ငွေလေးနဲ့ ၀ယ်ပေးခဲ့တယ်လေ..။ ပြီးတော့ အတန်းသွားမတက်ဘဲ.. စမ်းမားဆက်မှာ
မရမ်းပြားအစပ် ၀ယ်စားမိလို့ လဗမ်းဒါးမှာ
၀မ်းသွားတာတွေရော မေ့ပြီလား ။ အောချက်ရောက်တော့ ငါ့ကို
အပြောမညက်လို့ဆိုပြီး မင်း ဘောတစ်ချက်ကန်လိုက်တာ အခုထိ
တခါ..ဒိုဗာမှာ ချိန်းထားတုန်းက အကိုမလာလို့ဆိုပြီး ငိုရှာတော့
ဟာသအတိုအထွာနဲု့ ဂျိူကာလို လုပ်ပြီး ချော့ခဲ့တာ မှတ်မိသေးရဲ့လား ။
တာ့ နှပ်ချီးထွက်ကျလို့ဆိုပြီး မင်း အရှက်ကြီးရှက်ရတယ်လေ..၊
ကိုယ်အလိုက်မသိဘဲ၇ယ်မိလို့ လက်သီးတစ်ချက်သမ ခံလိုက်ရသေးတယ်..ဟီးဟီး ။
ဘွန်လေးမှာ သူငယ်ချင်းတွေ ချွန်ပေးတာနဲ့ပဲ မင်းနဲ့ပြတ်မလိုဖြစ်သွားသေးတယ်
။ လိပ်စိုက်ရောက်တော့ ကိုယ့်ပုခုံးပေါ် မင်း အိပ်ငိုက်နေတုန်း မင်းအကိုနဲ့
ထိပ်တိုက်တွေ့တာ ကိုယ်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ စိတ်အိုက်ခဲ့ရသေးတယ် ။
တိုဖားရိုးမှာ မင်းကို ဟိုကြားတိုးမိလို့ အကိုတအားဆိုးတယ်ဆိုပြီး
စိတ်တိုတိုနဲ့ မူနေတာများ…။ ဘူးဂစ်မှာ နှစ်ဦးမေတ္တာ ပြတ်သုဉ်းလို့ ရင်ထဲ
ဆူးနစ်ကာ အသက်ဆုံးတော့မလို နာကျင်ခဲ့ရပါတယ်။ ရက်ဟေးမှာ
လက်ကလေးကိုင်မိလို့ ရှက်ရှက်နဲ့ ထွက်ပြေးတာတွေ ၊ စီးတီးဟောမှာ
တဟီးဟီးပြောခဲ့တာတွေ ၊ ဂေလမ်းမှာ အသေနမ်းခဲ့တာတွေ ပြန်စဉ်းစားရင်း
အယ်ဂျူးနစ်အရောက် တကယ်အရူးဖြစ်လောက်အောင် ခံစားခဲ့ရပါပြီ ..။
တချိန်က အတိတ်ပုံတွေကိုသတိရရင်း..လောကကြီးကို စိတ်ကုန်လို့
ဘုန်းကြီးဝတ်ဖို့အကြံအစည်နဲ့ ချန်ဂီကနေ မြန်ပြည်ကို..ပြန်ပြီ အချစ်ရယ်..
(ငါမှတ်မိတဲ့ အမ်အာတီလည်း ဒီလောက်ပဲရှိတယ်)
sawgangster blog မှာတွေ့လို့ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်
« Reply #56 on: May 10, 2011, 03:37:30 PM »
« Reply #57 on: May 10, 2011, 03:53:57 PM »
ပထမလူနာလဲ သစ်ပင်ပေါ်ကနေဆင်းလာပါတယ်။ ဆရာဝန်က
« Reply #58 on: May 10, 2011, 04:02:04 PM »
မန်နေဂျာ။ ။ မင်းမွေးနေ့ ပြောပါ
ကိုထုံ ။ ။ အောက်တိုဘာ ၁၃
မန်နေဂျာ။ ။ ဘယ် နှစ်လဲ
ကိုထုံ ။ ။ နှစ်တိုင်း
နိုင်ငံခြားခရီးမှ ပြန်ရောက်လာသော ကိုထုံက သူမိန်းမကိုမေးတယ်…
“ငါက နိုင်ငံခြားသားနဲ့များ တူနေလား”
“တူပါဘူး၊ ဘာလို့ လဲ”
“လန်ဒန်မှာ အမျုိးသမီးတယောက်က ငါ့ကို
အမေရိကန်တိုးရစ် တစ်ယောက်က ကိုထုံကို မေးကြည့်တယ်….
အမေရိကန်။ ။ ဒီရွာမှာ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့လူ တစ်ယောက်ယောက်များ
ကိုထုံ ။ ။ ဟင့်အင်း…ကလေးလေး တွေဘဲ မွေးတာ
ဆရာ ။ ။ ဂန္ဒီ ဂျရမ်သီ အကြောင်း မှတ်ချက် ရေးပါ
ကိုထုံ ။ ။ ဂန္ဒီ ဟာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပါ။ ဂျရမ်သီ
ကိုတော့ ကျနော် မသိပါဘူး။
ကိုထုံနဲ့ သူ့ဇနီးသည်တို့ ကားငှားစီးလာစဉ်ဖြစ်သည်။
ကားဒရိုင်ဘာက နောက်ကြည့်မှန်ကို ချိန်နေပါတယ်။ ဒါကိုမြင်တဲ့ကိုထုံက…
“မင်းက ငါ့မိန်းကို ခိုးကြည့်မလို့ပေ့ါလေ၊ ဘယ်ရမလဲကွာ…ဖယ်စမ်း ငါမောင်းမယ်၊
« Reply #59 on: May 10, 2011, 04:04:58 PM »
မန်နေဂျာ။ ။ မင်းဟာ သုံးထပ်တိုက်ပေါ်ရောက်နေတယ်လို့
စိတ်ကူးကြည့်လိုက်၊ အဲဒီတိုက်ကိုမီးလောင်နေပြီဆိုပါတော့၊ မင်းဘာဆက်လုပ်မလဲ
ကိုထုံ ။ ။ လွယ်လွယ်လေး၊ စိတ်ကူးနေတာကို ရပ်လိုက်မှာပေ့ါ၊
ကိုထုံ ။ ။ အဲဒီကောင်မလေးက နားလေးနေတယ်ထင်တယ်ကွ
သူငယ်ချင်း ။ ။ ဘာလို့ လဲ
ကိုထုံ ။ ။ ငါက သူ့ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာကို…သူ့ ထီးက အသစ်ကြီးနော်
ဆရာ ။ ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှေးအကျဆုံး သတ္တဝါကို ပြောပါ
ကိုထုံ ။ ။ မြင်းကျား
ဆရာ ။ ။ ဘာလို့လဲ
ကိုထုံ ။ ။ သူက အဖြူအမဲ ဘဲရှိသေးတယ်လေ…
ကွန်ပြူတာကုမ္မဏီ ၏ အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်….
မန်နေဂျာ။ ။ မင်း MS office ကို သိသလား
ကိုထုံ ။ ။ လိပ်စာသာပေးလိုက်ပါ၊ ရအောင်ရှာသွားလိုက်ပါမယ်…
ဆရာ ။ ။ လိမ္မော်သီး နဲ့ ပန်းသီး ရဲ့ခြားနားချက်ကိုပြောပါ
ကိုထုံ ။ ။ လိမ္မော်သီးရဲ့ အရောင်က လိမ္မော်ရောင်ဖြစ်ပေမယ့်